Kral Bozguncu Apk Dhawunirodha Ye Android [Nhabvu Zvabuda] - Luso Gamer
Chikamu chemitambo chinogara chichionekwa sechikamu chinodiwa uye chakatsvakwa online. Nekudaro, vateveri vazhinji vanogara vachitsvaga yechokwadi yepamhepo chikuva asi vasingakwanise kuiwana. Naizvozvo tichitarisa chikumbiro chefani pano tinopa Kral Bozguncu.
Chaizvoizvo, iyo application ndeye online mitambo sosi. Apo nhengo dzakanyoreswa uye dzisina kunyoreswa dzinobvumirwa kuwana zviri mukati. Izvo zvinosvikika mahara pasina chikwereti uye kunyorera. Pane zvimwe zvirambidzo zvakakosha izvo vashandisi vanogona kusangana nazvo.
Izvi zvinosanganisira kutenderera kwepamoyo uye kuona mavhidhiyo. Aya mamwe masarudzo haawanikwe kusarudza kune vashandisi veandroid. Kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chitsva uye chakasiyana icho chiri chechokwadi. Zvadaro tinokurudzira avo kuisa Nhabvu Mutambo kushandiswa.
Chii chinonzi Kral Bozguncu Apk
Kral Bozguncu Android ndeye online ine chekuita nemitambo Android application yakagadziridzwa yakatarisana nevatsigiri venhabvu. Chikonzero chekugadzira iyi application kupa online sosi. Iko kune vateveri vanowana zvichangobva kuitika pamwe neruzivo maererano nekutamba.
Kana isu tichiongorora musika uye kuwana akawanda online masosi. Ipapo takawana akawanda ayo ane chekuita nemitambo yakasiyana siyana. Mamwe akarongwa anotarisisa vateveri vekiriketi uye mamwe akarongwa achitarisa mimwe mitambo yemitambo.
Asi ruzhinji rweavo vanogona kukumbira mvumo dzisina basa uye kumanikidza mushandisi kutenga kunyoreswa kweprimiyamu. Mari yekunyorera inogona kudarika mazana emadhora. Izvo zvinodhura uye hazvigoneki kune avhareji mari mafeni.
Saka tichifunga nezverubatsiro rwemutambi, nhasi pano yaunza KralBozguncu application yevashandisi veandroid. Ikozvino kubatanidza iyi imwechete application kunopa ese makuru ruzivo uye ruzivo nezve akasiyana zvikwata nhabvu.
zita Kral Bozguncu
zera 13.06 MB
Package Zita com.kralbozguncuca.tr
Kunyangwe ivo vanogadzira vanodyara aya akawanda makuru mapoka mukati. Iye zvino iwo mapoka anongopa niche-yakavakirwa zvemukati. Izvi zvinoreva kuti mushandisi anogona kuwana zvinodiwa zviri nyore nekuwana iwo makuru anosvikika mapoka.
Kunze kwekugovera zvirimo muzvikamu zvakasiyana, ivo vanogadzira zvakare vanodyara yakafara tsika yekutsvaga sefa. Ikozvino kuisa izwi rakakosha mukati mesefa kuchabatsira kuongorora zvirimo ipapo ipapo. Uyezve, inogona kubatsira mukuongorora iyo yakakosha ruzivo.
Rangarira mhenyu yezvibodzwa inowedzerwa ne stats sarudzo. Iyo live zvibodzwa zvichabatsira kupa zvichangobva kuitika maererano nemitambo ichangobva kuitika. Kunyangwe izvo zviitiko zviri mukuenderera mberi mode zviripowo kuti utarise.
Ehe, iyo mhenyu bhodhi sarudzo ichapa ichangoburwa match stats uye mhedzisiro ine ruzivo rwevatambi vese. Kunyangwe vagadziri vari kuronga kuwedzera uye kugadzirisa akasiyana mamwe ma pro maficha. Izvo zvinongo shandura chiitiko che fan.
Saka iwe uri weTurkey uye unoda kuongorora mitambo yenhabvu mumutauro mumwe chete wenyika. Ipapo isu tinokurudzira avo mafeni kuisa Kral Bozguncu Dhawunirodha mukati me smartphone. Uye unakirwe nekusingaperi premium maficha emahara.
Hapana kunyoreswa kwepamberi.
Nyore kuisa uye kurodha.
Kuisa iyo app kunopa akawanda pro sarudzo.
Izvo zvinosanganisira kupa ruzivo.
Nezvezviitiko zvenhabvu zvakawanda.
A live scoreboard rinowedzerwa.
Saka vateveri vanozowana zvitupa zvitsva.
Iyo mhedzisiro counter ichagadziridzwa nenguva.
Iyo inotsigira yechitatu bato kushambadzira.
Asi ichaonekwa mushure memvumo yemushandisi.
Nzira yekudhawunirodha Kral Bozguncu App
Iyo yazvino vhezheni yefaira reapp inokwanisa kuwanikwa kubva kuPlay Store. Nekudaro, ivo vanogadzira vakaisa chigadzirwa pakati pezvigadzirwa zvinorambidzwa. Chikonzero cheizvozvo nekuda kwekurambidzwa kwenyika uye zvimwe zvakakosha.
Zvinoreva kuti michina inokodzera chete inotenderwa kuwana Apk faira. Asi tichitarisa kune vamwe vashandisi ve smartphone, isu tinopawo yakagadziridzwa vhezheni yeApk faira pano mukati mekurodha chikamu. Ingobaya pamusoro pekurodha bhatani rekubatanidza uye pinda faira reapp nekudzvanya kumwe chete.
Kuvapo kwefaira reapp pamusoro pePlay Store kunoratidzawo iyi yakananga vhoti yekuvimba. Izvi zvinoreva kuti chigadzirwa chiri nyore uye chakachengeteka kuwana. Ingo dhawunirodha uye isa ichangoburwa apk faira pasina kunetseka uye unakirwe nekusingaperi machesi ane hukama.
Kune akawanda emamwe emitambo ane hukama app mafaera anoburitswa. Ndekupi kwakanaka mukupa mibairo yemutambo. Kuti uongorore iwo maapplication ndapota isa anotevera maApk mafaera. Ndivo Nodonet Apk uye IPL Live Apk.
Avo vanoda nhabvu nhabvu plus havakwanise kupotsa kanguva kamwechete. Ipapo ivo vashandisi vanofanirwa kurodha Kral Bozguncu Apk ndiwo mafoni avo. Uye nakidzwa nekuwana zvazvino zvabuda pamwe neruzivo rwevatambi nechati yakazara manhamba.
Categories Sports, Apps Tags Nhabvu Mutambo, Kral Bozguncu, Kral Bozguncu Apk, Kral Bozguncu App, Kral Bozguncu Download Post navigation
Imwe Yekurwa Nzira Apk Dhawunirodha Ye Android [Chinese Game]